Ungakwazi ukuhamba ngesihlalo sabakhubazekile ngomkhumbi we-cruise? | Izikebhe ze-Absolut
Ungakwazi ukuhamba ngesihlalo sabakhubazekile emkhunjini wokuhamba ngomkhumbi?
U-Ana Lopez | | Amathiphu
Uma uzohamba ngomkhumbi futhi udinga ukuthi uguqulwe, ngokwesibonelo ngoba ukuhamba kwakho kunciphile futhi udinga isihlalo esinamasondo, ayikho inkinga. Wonke amakhasi enkampani yokuthumela anikela ngenketho ye- cruises kufinyeleleke. Ngokuvamile kuphela kuzofanele uhlole le nketho lapho ubhuka i-cruise, noma enkampanini efanayo.
Kulungile manje kunezidingo ezikhethekile ezahlukahlukene, futhi kwesinye isikhathi kufanele ubhale phansi noma ulande uhlu lwemibuzo bese ulithumela ngokubhuka kwakho. Ngezansi sichaza ngemininingwane ngemininingwane onentshisekelo yokwazi ukuthi ufuna ukuhamba ngesikebhe futhi ube nesihlalo sabakhubazekile.
1 Umkhumbi onokuhamba okuncishisiwe
2 Amakhabethe aguqulelwe izihlalo ezinamasondo
3 Izingane ezinezidingo ezikhethekile
4 Amanye amandla ahlukene
Umkhumbi onokuhamba okuncishisiwe
Ngokuvamile, izinkampani zemikhumbi ziye zajwayela abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo wonke amabhuloho, izindawo ezivamile nemikhumbi yokusiza. Imininingwane maqondana nalokhu, ngokusho kwesipiliyoni sethu, kubhola lokuvikela elenzeka ngosuku lokuqala ebhodini, cishe bakhohlwa njalo ukusho leli qembu futhi bakhombe ukuthi yimiphi iminyango nokuphuma okufanele bayilandele.
Izinkampani eziningi zinikeza ukuthi kungenzeka ukuthi une- umngane uma uyidinga ohambweni. Kukhona abanye abagibeli abagibela futhi behle ngezihlalo ezinamasondo, kwazise bangabantu asebekhulile, abanokuhamba okuncane futhi ukudluliswa kwabo kwenziwa kube lula ngalesi sikhathi, yize bengakusebenzisi emkhunjini ngokuhamba kwesikhathi.
Uma ufuna ukukwenza ukuvakasha futhi unciphise ukuhamba, kufanele ukusho lapho futhi ukubekelile, ngoba okunye kungahle kunganconywa kuwe ngenxa yezinga lobunzima babo, noma awukwazi ukukwenza ngqo. Indlela engcono yokuthola lokhu ngokubuza.
Imikhumbi yesimanje ye IRoyal Caribbean inama-cranes wokubacindezelaukuze uthathe idiphu elihle echibini. Ngeke ube nenkinga emibonisweni, ngoba kuhlale kunezihlalo ezibekelwe abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo, futhi okufanayo kuya ezindaweni zokudlela.
Amakhabethe aguqulelwe izihlalo ezinamasondo
Kunjalo kunamakamelo aguquliwe. Zibanzi futhi zinikeza inkululeko enkulu yokuhamba. Njengokwejwayelekile, bavame ukukala phakathi kuka-14 m2 kuye ku-27 m2, banakho ngezinsiza ezengeziwe nemishini, njengebhentshi eligoqwayo eshaweni. Banikela ngengaba yokujika yemitha elilodwa nengxenye eduze kombhede, ezindlini zokugezela nasezindaweni zokuphumula. Izinkampani zemikhumbi ziqikelela kakhulu ekusetshenzisweni kwala makhabethe, futhi ziqaphele kakhulu ukuthi ukukhwabanisa akwenzeki kulokhu, nokuthi zisetshenziswa ngabantu abakudinga ngempela.
Impela uyakwazi okubiziwayo i-travescooter, una isihlalo esinamasondo sikagesi, incanyana, njengebhayisikili elinamasondo amathathu, evumela ukuthi usuke endaweni ethile uye kwenye ngesikebhe ngendlela entofontofo, futhi lokho okugoqekayo, qaphela! ngoba akuzona zonke izinkampani ezikuvumela ukuthi usisebenzise, ​​futhi bakucela uhlobo oluthile lwesitifiketi sezokwelapha ukuze ukwazi ukusithola.
Izingane ezinezidingo ezikhethekile
Vele ungahamba nengane enamandla akhethekile futhi ujabulele ukuhamba ngesikebhe okuhle. Sithintane namawebhusayithi amaningana ezinkampani ezinkulu futhi yize enganikeli ngensizakalo ethile yokunakekela izingane, abasebenzi bezokuzijabulisa baqeqeshelwe ukunikeza imisebenzi eminingi, Phakathi kwalokhu lo mfana noma le ntombazane nakanjani izokwazi ukubamba iqhaza.
Kwezinye izimo, njengoba izingane zivame ukuqoqwa ngeminyaka, noma nini lapho abazali befisa ukuthi bangafakwa kwezinye izingane noma abantu abasha abancane kunabo (ngiyaphinda, ngemvume yabazali) noma babambe iqhaza emisebenzini ethile nomndeni wakhe.
Amanye amandla ahlukene
Ngaphezu kokuhamba okuncishisiwe, izinkampani ezihamba ngezikebhe zihlinzeka ngezinsizakalo zazo futhi zenzelwe abantu abanezinkinga zokuzwa, bazokunikeza ngedivayisi yezokuxhumana yezithulu (TDD) enokukhanya nokudlidliza, ucingo lwetekisi, izinkinga zokubona (buza ukuthi ungakwazi yini letha inja yakho ekuqondisayo), ukudla okukhethekile, i-dialysis ... noma ezinye izidingo.
Njengoba ngishilo ekuqaleni, into enhle kakhulu ukuthi kusukela ekuqaleni usho ukuthi ziyini izidingo zakho. Uma ufuna ukuthola eminye imininingwane ngalesi sihloko, ngincoma ukuthi ufunde Lesi sihloko.
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » General » Amathiphu » Ungakwazi ukuhamba ngesihlalo sabakhubazekile emkhunjini wokuhamba ngomkhumbi?
Yiziphi futhi ngingahamba nini esikebheni sokuma?